Yintoni uyilo lweWebhu oluPhendulayo? I-RWD
Yintoni uyilo oluPhendulayo? (Ividiyo echazayo kunye ne-infographic)
NgoLwesibini, Aprili 28, 2020 NgoMgqibelo, nge-27 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kuthathwe iminyaka elishumi Uyilo lwewebhu oluphendulayo (RWD) ukuya kwindawo ephambili ukusukela UCameron Adams uqale waziswa umxholo. Uluvo lwalunobuchule- kutheni singenakuyila iisayithi ezihambelana nokubukwa kwesixhobo esijongwa kuso?
Yintoni uyilo oluPhendulayo?
Uyilo lwewebhu oluphendulayo (i-RWD) yindlela yoyilo lwewebhu ejolise ekuyileni iisayithi ukubonelela ngamava afanelekileyo okujonga- ukufunda ngokulula kunye nokuhamba ngenqanawa ubuncinci bokwenza ubungakanani kwakhona, ukukrala, kunye nokuskrola-kuluhlu olubanzi lwezixhobo (ukusuka kwiifowuni eziphathwayo ukuya kwikhompyuter yeekhompyuter. iimonitha). Indawo eyilelwe nge-RWD ihlengahlengisa ubume bayo kwindawo ekubukelwa kuyo isebenzisa ulwelo, iigridi ezisekwe kubungakanani, imifanekiso eguqukayo, kunye nemibuzo yemithombo yeendaba yeCSS3, ulwandiso lomgaqo @media.
Ngamanye amagama, izinto ezinjengemifanekiso zinokuhlengahlengiswa kunye nokubekwa kwezi zinto. Nantsi ividiyo echaza ukuba yeyiphi uyilo oluphendulayo nokuba kutheni inkampani yakho kufuneka iyiphumeze. Kutshanje siyiphuhlisile i DK New Media indawo ukuba iphendule kwaye ngoku isebenza kuyo Martech Zone ukwenza okufanayo!
Indlela yokwakha indawo ephendulayo inzima njengoko ufuna ukuba nolawulo oluphezulu kwizitayile zakho ezilungelelaniswe ngokobungakanani bendawo yokujonga.
Izikhangeli ziyazazi ngobungakanani bazo, ke zilayisha istayile ukusuka phezulu kuye ezantsi, zibuza izitayile ezifanelekileyo kubungakanani bekhusi. Oku akuthethi ukuba uyilo lweetayitile ezahlukeneyo kwisayizi nganye yesikrini, kufuneka ususe izinto eziyimfuneko.
Ukusebenza ngengqondo yokuqala yeselfowuni ngumgangatho osisiseko namhlanje. Ezona klasi zodidi oluphezulu azicingi nje malunga nokuba indawo yazo iyashukumiseka na kodwa inamava abathengi apheleleyo.
U-Lucinda Duncalfe, i-CEO ye-Monetate
Nantsi i-infographic evela kwi-Monetate ebonisa izibonelelo ezinokubakho zokwenza uyilo olunye oluphendulayo lwezixhobo ezininzi:
Ukuba ungathanda ukubona indawo ephendulayo isebenza, yalatha eyakho Google Chrome isikhangeli (ndiyakholelwa ukuba iFirefox inenqaku elifanayo) ukuya DK New Media. Ngoku khetha Jonga> umphuhlisi> Izixhobo zomphuhlisi kwimenyu. Oku kuyilayisha iqela lezixhobo ezantsi kwesikhangeli. Cofa kwi icon encinci yeselfowuni ngasekhohlo kwebar yeZixhobo zeNjiniyela yezixhobo.
Ungasebenzisa ukhetho lokukhangela phezulu ukutshintsha umbono ukusuka kubume bomhlaba ukuya kumzobo, okanye ukhethe naliphi na inani lobungakanani beepropathi ezilungiselelwe kwangaphambili. Kuya kufuneka uphinde ulayishe iphepha, kodwa sisixhobo esipholileyo emhlabeni sokuqinisekisa useto lwakho lokuphendula kunye nokuqinisekisa ukuba indawo yakho ijongeka intle kuzo zonke izixhobo!
tags: UCameron adamsIvidiyo ecacisayomobile ephendulayo iwebhusayithidesign ezwayouyilo oluphendulayo infographicinfographic ephendulayouyilo oluphendulayo lweselfowuniUyilo lwewebhu oluphendulayorwdyintoni uyilo oluphendulayoyintoni uyilo lwewebhu oluphendulayoyintoni i-rwd
Ukutshintsha iVenkile: Ukuthengisa iiNkonzo okanye iiMveliso onokuthi wabelane ngazo, ngezixhobo oziFunayo
Meyi 31, 2015 kwi-1: 13 PM
Uyilo lweWebhu aluselulo ukhetho lwee-webmasters, ngoku kunyanzelekile kubo. Enkosi ngokwabelana ngale posi inolwazi.
Juni 2, 2021 ngo-6: 04 AM
Enkosi kakhulu kuDouglas ngeli nqaku lichazwe kakuhle. Ndimele ndivumelane nale nto nangona kwicala lomxholo wezinto. Uninzi lweesayithi ezenza ubume bokuphendula abuyi kwanela. Sifuna umxholo ophendulayo. Kodwa kwiiwebhusayithi ezisisiseko ngokuqinisekileyo siya kusebenzisa inqaku lakho elibhalwe kakuhle ngendlela yokuphatha le nto!
Juni 2, 2021 ngo-12: 42 PM
Ndicinga ukuba unyanisile, Aaron. Akwanelanga ukwenza ubungakanani kwakhona kunye nokuhambisa izinto… kufuneka sisebenzise umxholo ngokufanelekileyo.